Peru: Tonga ao Lima ny Cow parade · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2009 8:15 GMT
Andro vitsy lasa izao, rakotry ny sarin'ombivavy mivongana mitovy habe amin'ny tena izy i Lima. Ny Cow Parade dia maneho asa 80 samihafa ao anaty zaridaina sy toerana natao ho an'ny daholobe manerana ny tanàna izy natao indrindra hamidy hanangonana vola ho an'ireo fikambanana maro. Tany Soisa no niandohan'ny hetsika toy ity mba handrisihana ny seha-pamokarana ronono.
Hita eny amin'ny manodidina ny tanàna ireo sarivongana, araka izay itanisàn'ny Tranonkala Viajando por Perú [es] azy:
Ny asa tsirairay, voavolavola sy voaloko tao anaty fahaiza-mamorona sy fahaiza-manao tokoa, dia aranty ao Lima Main Square (ombivavy 10), Scribes Passage (ombivavy 5 ), sy ao Downtown Lima. Ao [amin'ny distrikan'i] Miraflores, azo atao ny mijery ny fampirantiana ao amin'ny Salazar Park (ombivavy 15 ), Zaridainan'i Love (ombivavy 5 ), Raimondi Park (ombivavy 12 ), Kennedy Park (ombivavy 10 ). Mandritra izany, [ny distrikan'i] Pueblo Libre dia afaka mankafy azy ireo ao amin'ny Central Park (ombivavy 4 ). Ao amin'ny [distrikan'i] Surco, ombivavy 9 no haseho ao amin'ny Jockey Plaza Mall. [Ny distrikan'i] Barranco koa dia manana vitsivitsy amin'ireto asa ireto ao amin'ny Saenz Peña Park (ombivavy 7 ) ary ao amin'ny Chabuca Granda Passage (ombivavy 3 ).
Ombivavy misalotra ny lokon'ny zotram-pitaterana iray, Kennedy Park
Nefa, fomba ahoana no niaingan'izao rehetra izao? Ny blaogy ***Tota Iluxtra*** no manome ny valinteny [es]:
Taona maro lasa izay, ilay Soisa lahy Walter Snapp no nanan-kevitrahanosika ny seha-pamokarana ronono tao Zurich tamin'ny alalan'ny fandokoana ombivavy niaraka tamin'ny borosin'ireo mpanao taokanto tao an-toerana, namboarina tamin'ny fibre de verre. Tamin'ny 1999, Meter Hanig, mpandraharaha avy any Chicago, no nahazo ny alàlana ary dia nitondra ny haitao tany Amerika, [ary] nanomboka teo ity hetsika fanangonam-bola ity dia nahavoriana 25 tapitrisa dolara ho an'ny asa fanasoavana.
Ombivavy nampiakanjoana vesta, Kennedy Park
Ny blaogy Corresponsales escolares [es], ampiantranoin'ny gazety Peroviana El Comercio, milaza amintsika hoe iza no handray ny tombontsoa avy amin'ny Cow Parade tao Lima:
Aorian'ny fampirantiana, hisy ny fivarotana amina'izay sahy ambony indrindra ny 64 amin'ireo sarivongana mba hanangonam-bola ho an'ny Foibe Ann Sullivan ao Peru, Socios en Salud NGO (mpiara-miombon'antoka ara-pahasalamana) ary ny Lima Foundation.
Ombivavy mitorovoka manao fitafy cool, LarcoMar
Haharitra hatramin'ny Febroary, 2010 ny fampirantiana.
Ombivavy voaravaka loko marevaka, LarcoMar
Ny sary rehetra mandravaka ity lahatsoratra ity dia ny tompony daholo no naka saripika azy, na tao LarcoMar na tao Parque Kennedy (Miraflores).